Maitiro ekudzora ako PC ari kure | Gadget nhau
Maitiro ekudzora ako PC ari kure
Ignatius Room | | Applications, Software
Gore risati razivikanwa, nzira chete yekuenderera mberi nekushanda kubva kune imwe nzvimbo yaive nekugadzirisa data rese pakombuta yedu ne pendrive, zvirinani izvo zvataiziva kuti tingangoda, nzira yekusaishandisa nekuda kwehurongwa hwekuchengetedza gore.
Nekudaro, haisiyo mhinduro yezvose, kunyanya kana tiri mukambani medu, isu tinoshandisa yedu yega manejimendi chirongwa, chirongwa chisingape mukana wekubatana kure kana chakawandisa kubvumirana nekushandisa kushoma. Kune aya kesi, mhinduro ndeyekubatanidza kure.
Izvo chete asi izvo zvatinowana mukugona kwekubatanidza kure ndezvokuti tinoda michina kuti igare iri nguva dzose, kana pakuzorora, kuitira kuti kubatana kusungiswe patinotumira chikumbiro chekubatanidza. Izvi zvinogona kugadziriswa zviri nyore nekugadzirisa zvirimo uye zvadzimira zvemidziyo yedu kure, kuti zvivepo patinoziva kuti tinoziva kuishandisa.
Kana tichibatanidza kure, mune zvese zviitiko isu tinoda maviri mafomu, imwe inoshanda sevatengi, iyo yatinoisa pakombuta kubva kwatinozobatanidza uye imwe inoshanda sevha, iyo yatinoisa pakombuta. kuti isu tinoda kubata kure.
Haasi ese maapplication atinokuratidza pazasi akagadzirirwa kushanda kure neimwe komputa zvakanyatsotishandira isu kuita iri basa. Kana tangojekesa kuti zvese izvi zvinoshandiswa zvinoshanda zvizere, danho rinotevera ndere kuzvibvunza isu kuti kana zvakakodzera mari yavanobhadhara (kwete ese mahara).
1 Remote desktop zvirongwa zvePC neMac
1.2 Chrome kure desktop
1.3 Mahwindo ari kure desktop
1.4 Chero Dhesiki
1.5 Remote Desktop Maneja
Remote desktop zvirongwa zvePC neMac
Iro zita reTeamViewer rinosanganisirwa neiyo kure kure kubatana kwemacomputer kubva kubvira makomputa paakatanga kusvika kudzimba. Iri sevhisi ndeimwe yeanonyatso kuzivikanwa uye anonyanya kuita mabasa akawanda atinogona kuwana mumusika, nekuti haingotitenderi kutonga timu zviri kure, asi zvakare inotibvumidza kuendesa mafaira pakati pezvikwata, hurukuro yekukurukura nezvimwe zvikwata .. .
Iko kushandiswa kwekushandisa kwakasununguka zvachose kune vashandisi vega, asi kwete kumakambani, makambani ane zvirongwa zvakasiyana zvavanogona zvichienderana nenhamba yemakomputa atinoda kubatana nawo. TeamViewer, inowanikwa zvese zve Mahwindo nezve macOS, Linux, ChromeOS, Raspberry Pi, iOS uye Android.
TeamViewer Remote Kudzora
Chrome kure desktop
Mhinduro iyo Google inotipa ndiyo yakapusa pane zvese, uye inotibvumidza kushandisa komputa kure, kubva kune imwe komputa (PC / Mac kana Linux) kana kubva kune chero nhare mbozha kuburikidza nechinoenderana application. Google Chrome Remote Desktop Haisi chimwe chinhu kunze kwekuwedzera kwatinofanira kuisa zvakananga kubva ku Webhu Chrome Chitoro paGoogle Chrome.
Kana tangoisa, tinofanirwa kumhanyisa kuwedzera pakombuta iyo yatinoda kuvabatanidza uye kuteedzera iyo kodhi inoratidzwa nechishandiso. Pakombuta yatinozobatanidza, tinopinda iyo kodhi kuti tione kubatana. Kana tangoisa kubatana, tinogona kuzvichengeta pakombuta yedu kuti tikwanise kubatana mune ramangwana.
Chrome Remote Desktop yakasununguka zvachose uye inoda kubatana kwakadzikama kuti ishande (mu ADSL kubatana hakushandi zvakanaka, ngatitii).
Mukugadziri: Google LLC
Mahwindo ari kure desktop
Mhinduro iyo Microsoft inotipa haina kuwanikwa mune dzese shanduro dzeWindows, chete mune Pro uye Enterprise shanduro kuti ubatanidze kure. Kubva kukombuta yekombuta tinokwanisa kubatana pasina dambudziko neWindows 10 Home vhezheni. Kana tangoisa basa iri, kuti tiishandise, tinofanirwa kurodha pasi kubva kuchitoro cheWindows, macOS, iOS uye Android iyo inoenderana application.
Unogona kushandisa Microsoft Remote Desktop mutengi ku batanidza kune PC iri kure uye zviwanikwa zvebasa rako kubva kwese kwese uchishandisa chero mudziyo. Iwe unokwanisa kubatanidza kune yako PC yebasa uye unokwanisa kuwana kune ako ese maapplication, mafaera uye network zviwanikwa senge iwe wainge wakagara padhesiki rako. Unogona kusiya zvikumbiro zvakavhurika pabasa uye wozoona iwo mamwe mafomu pamba, zvese kuburikidza neRD mutengi.
Mukugadziri: Microsoft Corporation
Chimwezve chishandiso chisingade chero kudyara kuti chikwanise kubatanidza zviri kure kune imwe komputa, tinoiwana mune Chero Desk, chishandiso icho chinowanikwa zvese zviri zviviri Mahwindo nezve macOS, Linux, Mahara BSD, iOS uye Android. Chero Dhesiki rinotibvumidza kuti titaurirane nevamwe vatinoshanda navo pagwaro rimwe chete, kuendesa mafaera pakati pemakomputa akasiyana, kunotibvumidza kugadzirisa mushandisi mushandisi, rekodha zvinobatana zvinoitwa ... idzi sarudzo dzekupedzisira dzinowanikwa mushanduro inowanikwa kumakambani, vhezheni iyo isiri yemahara, sezvazviri kune iyo inopihwa ne TeamViewer.
AnyDesk, iri kure desktop desktop
Mukugadziri: AnyDesk Software GmbH
Remote Desktop Maneja
Iyo Remote Desktop Maneja (RDM) inokonzeresa zvese zvinongedzo zviri kure papuratifomu imwe iyo inogoveranwa zvakachengeteka pakati pevashandisi uye mhiri kweboka rese Iine rutsigiro rwemazana eakavakirwa-mukati matekinoroji - anosanganisira akawanda maprotocol uye maVPNs - pamwe neakavakirwa-mukati-bhizinesi-giredhi manejimendi manejimendi maturusi, granular uye wepasirose-chikamu chekupinda ekudzora, uye akasimba mafoni maficha ekutsigira desktop vatengi veWindows uye Mac, RDM ibanga remauto eSwitzerland rekuwana kure.
Remote Desktop Maneja Inowanikwa mahara mahara kune asiri-eunyanzvi kushandiswa uye kwenzvimbo dzekudzidzisa. Inoenderana neWindows, macOS, iOS uye Android.
Devolutions Nzvimbo Yekushandira
Iperius Remote chirongwa chakareruka uye chakachinjika chinotibvumidza kubatana kure kure kune chero Windows komputa kana server. Iyo yekumisikidza haina kuomarara uye inotibvumidza kuti tiite kufambisa faira, zvikamu zvakawanda, otomatiki kuwana kure, mharidzo uye kugovana skrini.
Chinhu chega chatinogona kuwana nezve sevhisi iyi ndechekuti panguva ino inowirirana chete neWindows makomputa, saka kana iwe uine Mac iri pabasa, uchafanirwa kusarudza imwe yemhinduro dzakasiyana dzataratidza pamusoro. Kana zviri zvemidziyo, nhare, isu tinogona zvakare kushandisa yedu iPhone kana Android kuti ubatanidze kure.
Mukugadziri: Pinda Software
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Applications » Maitiro ekudzora ako PC ari kure
Huawei P40 Lite E: Makamera matatu pamutengo wakaderera
EMUI 10.1 Global Beta: Zviteshi zvinogadziridza uye nemaitiro ekuzviita